၃၉ ဗိုက်ပူကြီးဆိုင်ထဲထိုးရပ်ထားတဲ့ ၈ဝပြည့်နှစ် Themeနဲ့ Bar အလန်းကြီး
30 Oct 2018 . 4:45 PM
“ဂျုံးဂျုံးကျနေပြီ..ဂျုံးဂျုံးကျနေပြီ..၃၉ ဗိုက်ပူကြီးလို” ဆိုတဲ့ Snare သီချင်းထဲက ၃၉ ဗိုက်ပူကြီးတွေကိုလေ ကွီးဖြိုးလက်ထက် YBS တွေတအားပြည့်ကျပ်လာတဲ့ ၂၀၁၈ မှာ လုံးဝလုံးဝမတွေ့ရတော့လို့ ပြတိုက်သွားရှာရတော့မယ့်ဆဲဆဲ….
၃၉ ဗိုက်ပူကားကြီးကို ဆိုင်နံရံထဲ တစ်ခြမ်းကြီးမြုပ်ဝင်နေတဲ့ Decoration နဲ့ အလန်းစား Bar ကြီးကို မြေနီကုန်း ရှင်စောပုလမ်းပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ…
Wow…ပဲ။ အလန်းကြီးနော်..အလန်း။ နာမည်က “Old Skool” တဲ့။ ဆိုင်နာမည်ကို အလှဆင်ထားတာကိုက တကယ့် Old Skool ကြီးနော်။ စာလုံးတွေကို မီးလုံးတွေနဲ့လင်းထိန်နေအောင် Retro ပုံစံအလှဆင်ထားတာ။ ဆိုင်ဘေးအပြင်မှာလည်း ၃၉ကားစိမ်းကြီးက နံရံကို ဖောက်လို့ တဝက်တပျက်။ ကဲ..မိုက်ရော။
ဒီ Bar ကိုစိတ်ဝင်စားတာက ဟိုနေ့က တရုတ်ဆိုင်အသစ်လေးကို သွားရင်း တွေ့လိုက်မိတာပေါ့လေ။ Bar က လမ်းဆုံထောင့်မှာဆိုတော့ ၂ဖက်ဖွင့်ဝင်လို့ရတယ်။ ကိုယ် ပြောပြချင်နေတာက ခုမှလာမှာ။
ဆိုင်ရဲ့အထဲကလေ တကယ့် ၈ဝပြည့်နှစ်တွေရောက်သွားတာနော်။ Antique Decoration တွေ၊ အလန်းအမိုက် ခေတ်ဟောင်းရန်ကုန်ကိုဖော်ကျူးတဲ့ Wallpaper ကြီးတွေ၊ အပြင်အဆင်တွေ၊ ထူးဆန်းတဲ့မီနူးအစားအစာတွေနဲ့ “Old Skool” ကို ရုပ်လုံးကြွအောင် ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ ပိုင်ရှင်တွေတော့ အိုင်ဒီယာလေးအတွက် သဘောတွေကျရတယ်။
ပြီးတော့ တကယ့်ရတနာက ဟိုးခေတ်ဟောင်း တကယ့် Legendary အဆိုတော်တွေရဲ့ Unplugged Live တွေ ခနခနလုပ်ပေးတာပါပဲ။ အဲ့ဒီအချိန်ဟာ ငယ်ဘဝကို ခနပြန်ပြေးထွက်လို့ရတဲ့အချိန်ပါပဲ။ သီချင်းတွေကြား ကလေးဘဝကိုခပ်ရေးရေး ပြန်ရှာတွေ့မိတဲ့ အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ ပြန်လွမ်းရတဲ့ အချိန်တွေပါပဲ။ အဲ့ဒီအမှတ်တရတွေ ပြန်တူးဖော်ပေးနိုင်တာကတော့ ကျေးဇူးတင်မိတဲ့ထိပါ။
အစားအသောက်အကြောင်း ခုမှ ပြောမှာ- European အစားအစာတွေအဓိက ရတယ်။ Burger၊ Steak ဘာညာပေါ့။ Steak ကတော့ အသားကျက်ကျက်စားချင်တဲ့သူတွေအတွက် လုံးဝ Recommend ပေးကိုပေးရမယ့်ပွဲပါ။ စားပွဲပေါ်ချရုံနဲ့ တစ်ယောက်တတုံးဖဲ့စားကြတာ ချက်ချင်းဆိုသလိုပြောင်ပါလေရော။ ဈေးလည်း Steak ပွဲလို့မထင်ရအောင်သက်သာတယ်။
Old Skool ရဲ့ နာမည်ကျော်က ည ၇ နာရီမှစရတဲ့ ညထမင်းကြော် တဲ့။ ကိုယ်တွေသွားတုန်းက ညနေ၆နာရီဆိုတော့ မစားခဲ့ရတာ နာတယ်။ နို့မို့အရသာ ကောင်း၊မကောင်း ပြောပြလို့ရမှာ။ အဲ့လိုညမှရတဲ့ သီးသန့်ဗမာအစားအစာတွေချည်းပဲ ရောင်းသေးတယ်။ တကယ့် အဆန်းတကြယ် ဗမာစာစစ်စစ်တွေ၊အသုပ်တွေ ချည်းပဲ။သောက်ရင်းနဲ့ မြည်းလို့ ပိုကောင်းတယ်။
ဆိတ်သားစမူဆာဆိုတာလေးလည်း မဆိုးဘူး။ အချဉ်ကောင်းတယ်။ စမူဆာမွမွလေး။ ဈေးက ၃၅၀၀ တဲ့။ ဒါလေးကလည်း အသောက်လေးနဲ့တွဲ ရှယ်ပဲ။ အလဲ့။ အသားတော့နည်းတယ်။
ဝက်သားတုတ်ထိုးလည်းရတယ်။ အိုးလေးနဲ့ မီးအပူလေးပေးပြီးလာချတာ။ သူကတော့ ဈေးကြီးတယ်။ အရသာကတော့ ထူးထွေဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အရသာမငြိပါဘူး။
ဒီတခါသွားတာ ညဘက်မှရတဲ့အသုပ်အထောင်းလေးတွေမရတော့ စားရတာ အားမရခဲ့ပါဘူး။ မုန့်ဟင်းခါးတွေဘာတွေလည်း Bar မှာစားလို့ရတယ်တဲ့။ အဓိက က Drink အစုံရတယ်။
ပြောရရင် အစားအစာတွေအနေနဲ့ ပြေတာရော၊ မပြေတာရောစုနေလို့ ရွေးမှာတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဆိတ်စမူဆာတို့၊ အမဲမိုးခိုသားကင်တို့ကတော့ မစားမဖြစ် စားကောင်းတယ်။
လုံးဝသွားကိုသွားဖို့ တိုက်တွန်းချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ သူ့ Page ကိုအခြေအနေတချက်ကြည့်ပြီး ခေတ်ဟောင်း legendary အဆိုတော်ကြီးတွေရဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့ ၈ဝပြည့်နှစ်အလွန်ညကို ပြန်ပြေးသွားဖို့ အသင့်တော်ဆုံး Bar လေးပါ။ ပုံမှန်ဆို သူတို့ဆိုတာနားထောင်ဖို့ Show ပွဲတွေလုပ်ရင် လက်မှတ်တောင်ဝယ်ရတာကိုး။ ဒီမှာတော့ ကိုယ့်အတွက်ဖျော်ဖြေပေးနေတဲ့ပုံဆိုတော့ အခွင့်ထူးခံကြီးလိုပေါ့လေ။ ဆိုင်အနေအထားကတော့ မှောင်မှောင်ပါပဲနော်။
လူကြီးတွေဆိုရင်တော့ သွားကြည့်ပြီး ကြိုက်မှာ သေချာနေပါပြီလို့ လမ်းညွှန်လိုက်ရပါတယ်ဗျို့…. Old Skool ရဲ့ လိပ်စာက အမှတ် ၆၈ B၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ မြေနီကုန်း City Mart နောက်တင်ပါ။ သတိထားနော် ဒီ Bar က ညနေ ၃နာရီကနေ ည ၁ နာရီထိပါတဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီအတောအတွင်းတော့ အဲ့ထက်စောပိတ်တယ်ပြောတယ်။ သွားကြည့် ငယ်ဘဝကိုပြန်လွမ်းကြည့်ပါဦးနော်။
၃၉ ဗိုကျပူကွီးဆိုငျထဲထိုးရပျထားတဲ့ ၈ဝပွညျ့နှဈ Themeနဲ့ Bar အလနျးကွီး
“ဂြုံးဂြုံးကနြပွေီ..ဂြုံးဂြုံးကနြပွေီ..၃၉ ဗိုကျပူကွီးလို” ဆိုတဲ့ Snare သီခငျြးထဲက ၃၉ ဗိုကျပူကွီးတှကေိုလေ ကှီးဖွိုးလကျထကျ YBS တှတေအားပွညျ့ကပျြလာတဲ့ ၂၀၁၈ မှာ လုံးဝလုံးဝမတှရေ့တော့လို့ ပွတိုကျသှားရှာရတော့မယျ့ဆဲဆဲ….
၃၉ ဗိုကျပူကားကွီးကို ဆိုငျနံရံထဲ တဈခွမျးကွီးမွုပျဝငျနတေဲ့ Decoration နဲ့ အလနျးစား Bar ကွီးကို မွနေီကုနျး ရှငျစောပုလမျးပျေါမှာ တှလေို့ကျရတဲ့အခါ…
Wow…ပဲ။ အလနျးကွီးနျော..အလနျး။ နာမညျက “Old Skool” တဲ့။ ဆိုငျနာမညျကို အလှဆငျထားတာကိုက တကယျ့ Old Skool ကွီးနျော။ စာလုံးတှကေို မီးလုံးတှနေဲ့လငျးထိနျနအေောငျ Retro ပုံစံအလှဆငျထားတာ။ ဆိုငျဘေးအပွငျမှာလညျး ၃၉ကားစိမျးကွီးက နံရံကို ဖောကျလို့ တဝကျတပကျြ။ ကဲ..မိုကျရော။
ဒီ Bar ကိုစိတျဝငျစားတာက ဟိုနကေ့ တရုတျဆိုငျအသဈလေးကို သှားရငျး တှလေို့ကျမိတာပေါ့လေ။ Bar က လမျးဆုံထောငျ့မှာဆိုတော့ ၂ဖကျဖှငျ့ဝငျလို့ရတယျ။ ကိုယျ ပွောပွခငျြနတောက ခုမှလာမှာ။
ဆိုငျရဲ့အထဲကလေ တကယျ့ ၈ဝပွညျ့နှဈတှရေောကျသှားတာနျော။ Antique Decoration တှေ၊ အလနျးအမိုကျ ခတျေဟောငျးရနျကုနျကိုဖျောကြူးတဲ့ Wallpaper ကွီးတှေ၊ အပွငျအဆငျတှေ၊ ထူးဆနျးတဲ့မီနူးအစားအစာတှနေဲ့ “Old Skool” ကို ရုပျလုံးကွှအောငျ ပုံဖျောခဲ့တဲ့ ပိုငျရှငျတှတေော့ အိုငျဒီယာလေးအတှကျ သဘောတှကေရြတယျ။
ပွီးတော့ တကယျ့ရတနာက ဟိုးခတျေဟောငျး တကယျ့ Legendary အဆိုတျောတှရေဲ့ Unplugged Live တှေ ခနခနလုပျပေးတာပါပဲ။ အဲ့ဒီအခြိနျဟာ ငယျဘဝကို ခနပွနျပွေးထှကျလို့ရတဲ့အခြိနျပါပဲ။ သီခငျြးတှကွေား ကလေးဘဝကိုခပျရေးရေး ပွနျရှာတှမေိ့တဲ့ အခိုကျအတနျ့ပါပဲ။ ပွနျလှမျးရတဲ့ အခြိနျတှပေါပဲ။ အဲ့ဒီအမှတျတရတှေ ပွနျတူးဖျောပေးနိုငျတာကတော့ ကြေးဇူးတငျမိတဲ့ထိပါ။
အစားအသောကျအကွောငျး ခုမှ ပွောမှာ- European အစားအစာတှအေဓိက ရတယျ။ Burger၊ Steak ဘာညာပေါ့။ Steak ကတော့ အသားကကျြကကျြစားခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ လုံးဝ Recommend ပေးကိုပေးရမယျ့ပှဲပါ။ စားပှဲပျေါခရြုံနဲ့ တဈယောကျတတုံးဖဲ့စားကွတာ ခကျြခငျြးဆိုသလိုပွောငျပါလရေော။ ဈေးလညျး Steak ပှဲလို့မထငျရအောငျသကျသာတယျ။
Old Skool ရဲ့ နာမညျကြျောက ည ၇ နာရီမှစရတဲ့ ညထမငျးကွျော တဲ့။ ကိုယျတှသှေားတုနျးက ညနေ၆နာရီဆိုတော့ မစားခဲ့ရတာ နာတယျ။ နို့မို့အရသာ ကောငျး၊မကောငျး ပွောပွလို့ရမှာ။ အဲ့လိုညမှရတဲ့ သီးသနျ့ဗမာအစားအစာတှခေညျြးပဲ ရောငျးသေးတယျ။ တကယျ့ အဆနျးတကွယျ ဗမာစာစဈစဈတှေ၊အသုပျတှေ ခညျြးပဲ။သောကျရငျးနဲ့ မွညျးလို့ ပိုကောငျးတယျ။
ဆိတျသားစမူဆာဆိုတာလေးလညျး မဆိုးဘူး။ အခဉျြကောငျးတယျ။ စမူဆာမှမှလေး။ ဈေးက ၃၅၀၀ တဲ့။ ဒါလေးကလညျး အသောကျလေးနဲ့တှဲ ရှယျပဲ။ အလဲ့။ အသားတော့နညျးတယျ။
ဝကျသားတုတျထိုးလညျးရတယျ။ အိုးလေးနဲ့ မီးအပူလေးပေးပွီးလာခတြာ။ သူကတော့ ဈေးကွီးတယျ။ အရသာကတော့ ထူးထှဆေနျးဆနျးမဟုတျဘူး။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ အရသာမငွိပါဘူး။
ဒီတခါသှားတာ ညဘကျမှရတဲ့အသုပျအထောငျးလေးတှမေရတော့ စားရတာ အားမရခဲ့ပါဘူး။ မုနျ့ဟငျးခါးတှဘောတှလေညျး Bar မှာစားလို့ရတယျတဲ့။ အဓိက က Drink အစုံရတယျ။
ပွောရရငျ အစားအစာတှအေနနေဲ့ ပွတောရော၊ မပွတောရောစုနလေို့ ရှေးမှာတတျဖို့လိုပါတယျ။ ဆိတျစမူဆာတို့၊ အမဲမိုးခိုသားကငျတို့ကတော့ မစားမဖွဈ စားကောငျးတယျ။
လုံးဝသှားကိုသှားဖို့ တိုကျတှနျးခငျြတဲ့အကွောငျးကတော့ သူ့ Page ကိုအခွအေနတေခကျြကွညျ့ပွီး ခတျေဟောငျး legendary အဆိုတျောကွီးတှရေဲ့ သီခငျြးလေးတှနေဲ့ ၈ဝပွညျ့နှဈအလှနျညကို ပွနျပွေးသှားဖို့ အသငျ့တျောဆုံး Bar လေးပါ။ ပုံမှနျဆို သူတို့ဆိုတာနားထောငျဖို့ Show ပှဲတှလေုပျရငျ လကျမှတျတောငျဝယျရတာကိုး။ ဒီမှာတော့ ကိုယျ့အတှကျဖြျောဖွပေေးနတေဲ့ပုံဆိုတော့ အခှငျ့ထူးခံကွီးလိုပေါ့လေ။ ဆိုငျအနအေထားကတော့ မှောငျမှောငျပါပဲနျော။
လူကွီးတှဆေိုရငျတော့ သှားကွညျ့ပွီး ကွိုကျမှာ သခြောနပေါပွီလို့ လမျးညှနျလိုကျရပါတယျဗြို့…. Old Skool ရဲ့ လိပျစာက အမှတျ ၆၈ B၊ ဦးဝိစာရလမျး၊ မွနေီကုနျး City Mart နောကျတငျပါ။ သတိထားနျော ဒီ Bar က ညနေ ၃နာရီကနေ ည ၁ နာရီထိပါတဲ့။ ဒါပမေယျ့ ဒီအတောအတှငျးတော့ အဲ့ထကျစောပိတျတယျပွောတယျ။ သှားကွညျ့ ငယျဘဝကိုပွနျလှမျးကွညျ့ပါဦးနျော။